Obi ụtọ na Labour Day-News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Laborbọchị Ọrụ Ọụ
Oge: 2020-08-27 Hits: 22
Anyị ga-amalite ezumike site na Mee 1 ruo Mee nke 4 wee laghachi ọrụ na Mee 5th.
Daybọchị Ndị Ọrụ Mee Day sitere na abụbụ ọrụ ndị ọrụ Chicago na United States. Na Mee 1, 1886, ihe karịrị ndị ọrụ 216,000 na Chicago gbara abụbụ ọrụ iji gbaa ọgụ maka usoro ọrụ awa asatọ. Mgbe mgba mgba siri ike, ha mechara merie. Iji mee ncheta otu ndị ọrụ a, ewepụtara Mee 1 dị ka ụbọchị ọrụ ndị ọrụ mba ụwa.
Ihe nke ụbọchị ndị ọrụ dị mkpa bụ na ndị ọrụ enwetawo ikike na ọdịmma ha ziri ezi site na mgba na nnọgidesi ike na mmụọ na-enweghị atụ. Ọ bụ mmepe akụkọ ihe mere eme nke mmepeanya mmadụ na ọchịchị onye kwuo uche ya. Nke a bụ isi nke ụbọchị ọrụ. Ya mere, ndị mmadụ na-echegbu onwe ha gbasara ụbọchị ọrụ.
N'ụwa taa, anyị kwesịrị ịkwado nke ọma na ndị ọrụ kwesịrị ịhụ ọrụ ha n'anya. Ndị ọrụ ugbo ga-ahụ ala ahụ n'anya ma gbaa ndị mmadụ ume ka ha gbasie mbọ ike ịba ọgaranya. Iji mezuo ebumnuche anyị, anyị kwesiri ịdabere na mbọ nke aka anyị, na-arụsi ọrụ ike, ma na-agbasi mbọ ike, na-adabereghị na mmekọrịta ma ọ bụ ịdabere na ego. Mee ka ndị ọrụ nkịtị mara mma bụrụ ndị arụsị nke ụdị ọrụ na nke ọha na eze. Ihe anyị kwesịrị ịmatakwu bụ na ozugbo anyị nwere ike na akụnụba, anyị ga-eburu ibu ọrụ ndị metụtara ọha na eze.
N'ikpeazụ, anyị chọrọ ka onye ọ bụla nwee obi ụtọ ma mara mma ụbọchị Day！
Previous: Na-eche na mmiri na izute mara mma ndụ
Ọzọ: Oge opupu ihe ubi - achicha